Kunamata Points Kupesana Nenjodzi Vagari | NZIRA DZOKUNAMATA
Chipiri, July 27, 2021
musha Pfungwa dzemunamato Kunamata Points Kupesana Nenjodzi Wasters
Kunamata Points Kupesana Nenjodzi Wasters
Nhasi tichave tichinangana nemunamato mapoints tichipesana ne destiny wasters. Destiny Wasters idhimoni vamiririri vanoshandirwa nemuvengi vanotadzisa vanhu kusvika kune yavo yechipikirwa nyika. Vanogona kuve vanozivisa kana vanhu kana maitiro. Muhupenyu hwaJesu Kristu, Mambo Herodhi aive iye ramangwana waster iyo muvengi aida kushandisa kurwisa Kristu. Akaudza vachenjeri vatatu kuti vaende kunotsvaga mwana. Akateterera kuti vauye namashoko kwaari kana vawana mwana kuti aendewo kunomunamata. Zano raMambo Herodhi raive rekuuraya mwana. Mambo Herodhi mune iyo mamiriro aive muvhimi wenyeredzi uyo muvengi akagadzira kutambisa ramangwana raKristu Jesu.
Muhupenyu hweMuporofita Moses, yaive mweya wehasha. Mweya wekutsamwa wakamitisa Moses kupinda muvhu rechipikirwa kunyangwe zvese zvaakaita kubva pakutanga kwerwendo. Dai chete Mosesi aiziva kuti hasha dzaizomutadzisa, angadai akateterera kuna Mwari kuti amubatsire kushaya simba kwake. Zvakare, muhupenyu hwaSamson, Delilah ndiye aive mugumo wedambudziko. Akagara naSamson, akaita seshamwari yake kudzamara azivisa chakavanzika chesimba rake kwaari. Delila akaenderera mberi nekuzivisa icho chakavanzika kuvavengi vaSamson.
Saizvozvo, muhupenyu hwedu, kune vanhu vakavezwa nemuvengi kuti vauraye magumo edu. Vanogona kuita seshamwari dzedu padanho rekutanga, zvisinei, vavariro yavo yepakutanga kugadzira zvipingamupinyi zvinotitadzisa kuzadzisa tarisiro yedu. Destiny wasters anoshandisa zvemashiripiti masimba uye uroyi kuongorora nyeredzi yemunhu. Dzimwe nguva, anogona kunge ari iye anotakura mugumo anozochenjedza vaparadzi nezveramangwana rake. Izvi ndizvo zvakaitika kuna Josefa. Akave nehope uko Mwari akamuratidza magumo ake. Joseph akarondedzera hope dzake kuvakoma vake uye dambudziko rakatanga kwaari. Muvengi akashandisa vakoma vake sevamiriri vevapambi vemagumo uye vaparadzi, kurwisa magumo aJoseph.
Kune vanhu mumba mababa naamai vedu basa ravo nderekutarisa magumo evamwe vanhu. Ivo vanoziva mhando yeredzi dzine mwana mumwe nemumwe mumhuri uye vanofunga kuti ndiani achazadzisa ramangwana uye ndiani asingazogone. Tichave tichinamata kuna Mwari kuti aparadze marongero eanosuwa magumo chero mumutsara medu, munharaunda kana cacaus yeshamwari. Ndinonamata nemvumo yedenga, sezvatinoita izvi, isu tinenge takasununguka kubva pasimba remagumo emvura muzita raJesu.
Ishe, ndinokutendai nechipo cheupenyu. Ndinokutendai nenyasha nemaropafadzo pamusoro pehupenyu hwangu, Ishe zita renyu ngarikudzwe muzita raJesu.
Baba Tenzi, ndinouya kuzorwa nemurume wese akasimba muhupenyu hwangu, ndinowira kurufu izvozvi nemuzita raJesu.
Ndinodaidzira kubatana kwaMwari pakati pangu neyese yakashata muhupenyu hwangu. Ndinoraira nesimba rematenga, ngapave nekuparadzaniswa pakati pedu muzita raJesu.
Ndinonamata kuti murume wese neMukadzi vane huvepo muhupenyu hwangu hunounza chero chinhu kunze kwekudzokera shure, ngavabatane pakati pedu muzita raJesu.
Ini ndinouya kupokana nehun'anga hwenyeredzi muvhimi muhupenyu hwangu. Wese muvhimi wemagumo muhupenyu hwangu, Ishe, ngavaparadzwe muzita raJesu.
Girazi rega rega rakaipa riri kushandiswa nemuvengi kuongorora kufambira mberi kwangu muhupenyu, rega kutinhira kuparadze girazi rakadai muzita raJesu.
Ishe, murume nemukadzi wese akavimbisa kuti handichazviita muhupenyu, chero murume akavimbisa kuti magumo angu haazadzikiswe, ngavafe murufu nemuzita raJesu.
Ini ndinouya kuzopesana nekunyengedza kwese kwemuvengi kuti ndiparadze ramangwana rangu kana kuita kuti riparadze, nzira dzakadai ngadziparadzwe nemoto wemweya mutsvene.
Ishe Jesu, Jezebheri wese mudzinza rangu anoita sechipingamupinyi Kupesana nevana vekusangana, ngirozi yerufu ngairove munhu akadaro afe muzita raJesu.
Kwese kunobva simba, kuumba dambudziko muhupenyu hwangu, woma ino nguva muzita raJesu. Ini ndinouya kuzopesana neese madhimoni anoungana kupokana nezvandakafunga Ini ndinouya kuzorwa nemupata wese werima, coven yega yedhimoni panotorwa sarudzo pamusoro pekuda kwangu, ngazvipararire muzita raJesu.
Wese murume nemukadzi vanoongorora vamiriri verima, vanoshanda vachipesana nekufambira mberi kwangu muhupenyu, vanogashira kutinhira kwerufu muzita raJesu.
Ishe, ndinouya kuzorwa nemaropafadzo ese anotsvedza. Yese maropafadzo ekunyepedzera anongogara kwenguva pfupi, ndinouya kuzorwa nawo nesimba reMweya Mutsvene, muzita raJesu.
Tenzi, hurongwa hwese hwemuvengi kundiita muswe, ndinozvitsiura muzita raJesu.
Ishe, ndinonetesa zvese zvinoitwa nemuvengi kushandura magumo akarongerwa hupenyu hwangu naMwari nemoto weMweya Mutsvene.
Ishe Jesu, ndakagadzwa kuve musoro kwete muswe. Ndinotsiura hurongwa hwese hwemhandu kuti ndiite muswe. Izwi rako rinoti iwe unoziva mifungo yaunayo kwandiri iyo ipfungwa dzezvakanaka uye kwete dzezvakaipa kundipa inotarisirwa magumo. Ndinonamata kuti marongero ako ega asungwe pamusoro pehupenyu muzita raJesu.
Ishe, ndinouya kuzorwa nemiseve yese yekudzosera kumashure, miseve yese yekukanganisa yakandipfura kubva kuumambo hwerima. Miseve yakadaro ngaipere simba muzita raJesu.
Ini ndinopesana nemweya wese wekukanganisa muhupenyu hwangu. Mweya wega wega wekukanganisa muhupenyu hwangu wakaparadzwa muzita raJesu. Ini handizove mugadziri wezvangu kudonha muzita raJesu.
Ini ndinoparadza sungano dzese dzekufa zvisati zvaitika pamusoro pehupenyu hwangu. Ini ndinouya kuzorwa naro nesimba muzita raJesu. Nekuti zvakanyorwa, uye ivo vakamukunda neropa regwayana uye nemashoko echipupuriro chavo. Mweya wese werufu pamusoro pehupenyu hwangu wakaparadzwa muzita raJesu.
Previous nyayaKunamata Kunongedzera Kurwisa Rufu Pamucheto WeBudiriro
inoteveraKunamata Kunongedzera Kupesana neNguva Inoparadza mweya
Kunamata Points Kupesana neMweya weMweya
Kunamata Pfungwa Kukunda Kushushikana SeMutendi
Lindsay Dube Kubvumbi 23, 2021 At 8:44 pm
Ndiri kusimudzwa pamweya .. maita basa zvikuru.
Adetunji olusola Kubvumbi 25, 2021 At 5:28 pm
Zvinoshamisa, ndakanamata Mwari Wemasimbaose acharamba achifema akaburitsa ake makuru simba maropafadzo pauri, hauzombofa wakasvava muzita rine simba raJesu
Mapisarema 100 Zvinoreva Ndima Ndima
Zvikonzero zvishanu Zvinoitika Kuti Tive Nemuedzo
Kunamata Points Kugadzira Imba Yako Imba Yehondo
Dai 14, 2021
Munamato Kuti Mwanasikana Wangu Adzokere Kumba
Kunamata Kunongedzera Kutaura Kana Moyo Wako Uchinetsekana
Kutsanya uye Munamato wekununurwa kweNigeria